लोकमान प्रकरण : अख्तियार कमजोर बनाउने रणनीति - Ratopati
- | केदारनाथ नेपाल (निश्चल)
राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी सबैको मुखमा अचेल एउटै शब्द झुण्डिएको छ ‘लोकमान’ । लोकमानको विषयले मिडिया मात्र हैन देश नै हल्लिएको छ । राजनीतिक माहोल तातेको छ । केही नेताहरुको होस उडेको छ भने केही व्यक्तिहरु खुशी देखिन्छन् । यो विषयमा देश नहल्लियोस् पनि कसरी, हिजो तिनै दलहरु काङ्ग्र्रेस, एमाले र माओवादीले लोकमान अख्तियार प्रमुख हुन योग्य व्यक्ति हुन् भन्दै उनैलाई नियुक्त गरे । तर आज तीन वर्ष पूरा नहँुदै तिनै दलहरु उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन चाहान्छन् । आखिर किन ? दलहरुको भित्री स्वार्थ के छ यो विषयमा ? के देश दलहरुको मात्र पेवा हो ? जुन कुरामा पनि राजनीतिक भागभण्डाको स्वार्थ र उनीहरुकै मनपरी ?
एमाले र माओवादी केन्द्रले लोकमानलाई महाअभियोगका लागि प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । उनीहरु जसरी पनि लोकमानलाई महाअभियोग लगाएर पदबाट हटाउन चाहान्छन् । हुन त संसदमा लोकमान विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परिसकेका छन् । एमाले र माओवादी सांसदहरु लोकमानलाई जसरी पनि महाअभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । काङ्ग्रेसले पार्टीबाट निर्णय लिइसकेको छैन । तर काङ्ग्रेसको केही नेताहरुको कुरा सुन्दा काङ्ग्रेस पनि लोकमानको विपक्षमा उभिन्छ । सायद अबको केही दिनमा काङ्ग्रेसले ठोस निर्णय लिन्छ । लोकमानको विषयमा काङ्ग्रेसको निर्णयले नै गोल गर्नेछ खेलको सुरुवात माओवादी एमालेले गरे पनि त्यसको अन्त्य भने काङ्ग्रेसको गोलसँगै हुनेछ । काङ्ग्रेसले महाअभियोगको पक्षमा निर्णय लियो भने कार्की पदबाट बर्खास्त हुनेछन् । काङ्ग्रेस लोकमानको पक्षमा उभियो भने लोकमान प्रकरणमा दलहरु असफल हुन्छन् । त्यसपछि के होला ? कार्की पुनः पदमा फर्कलान् ? या दलहरुले अन्य कुनै उपाय निकालेर भए पनि उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँछन् । यसै हुन्छ भन्ने जवाफ अहिलेसम्म सुनिएको छैन ।
काङ्ग्रेसले लोकमानको पक्ष लियो भने नेपाली राजनीतिमा उसको दिनगन्ती सुरु हुने र आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेस सानो पार्टीको स्थानमा रहने टीकाटिप्पणी पनि भइरहेको छ । यदि काङ्ग्रेसले लोकमानका पक्षमा उभिएर महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने वातावरण बनायो भने तत्कालीन रुपमा सङ्कट, जन आक्रोश र नकारात्मक टिप्पणी खेप्नुपर्छ । तर दीर्घकालमा भने देशले पनि निकास पाउने छ । यस कार्यले धेरै भ्रष्टाचारीलाई सजायको भागीदार बनाउने छ । यदि लोकमान फेरि पदमा फर्किए भने राजनीतिक शक्तिको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउनेछन् । किनभने महाअभियोगको रिस उनलाई पक्कै छ । त्यो रिस उनले पक्कै फेर्नेछन् । कार्कीको पक्षमा वातावरण बन्यो भने राजनीतिक खोल ओडेका शक्ति र पदको आडमा भ्रष्टचार गर्नेहरु करिब करिब सकिनेछन् । दलहरुमा नेतृत्व पनि सक्षम व्यक्ति र युवाको हातमा हातमा जाने छ । त्यसपछि केही समय पश्चात् (नियुक्त भएको मितिले ६ वर्ष) लोकमानको समयअवधि आफै सकिने छ भने अख्तियारले नयाँ प्रमुख पाउनेछ ।
हुन त दलहरुले लोकमानलाई आफ्नो स्वार्थका लागि नियुक्त गरेका थिए । जसरी सिकारीले अरुलाई मार्ने नियतले पासो थाप्छ अनि त्यसमा आफू पर्ने अवस्था आयो भने जुनसुकै हतकण्ठा प्रयोग गरेर पासो चुडाउँछ, अहिले दलहरुको अवस्था पनि ठीक त्यस्तै भएको छ । दलहरुको यो कदमले अख्तियार कमजोर बन्दैछ भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ । हुन त यो विषयमा लोकमान नियुक्तकै बेलामा पनि चर्चा भएकै हो । लोकमान नियुक्तिले अख्तियार कमजोर बनाउँछ भनेर त्यही बेला चर्चा भएको थियो । आज आएर हिजोका त्यो विश्लेषण सही सावित भएको छ । दलहरुको बुझाइ थियो लोकमानले आफूले भनेको मान्छन् । त्यस अनुरुप काम गरे भने लुटतन्त्र मच्चाउन पाइन्छ भन्ने बुझाइ थियो तर लोकमानले दलहरुका लागि नभई आफ्नो र देशको लागि काम गरे । सुरुमा केही भ्रष्टाचारीलाई ठेगान लगाएर लोकप्रियता पनि कमाए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, पूर्व कार्यकारी निर्देशकसहित २६ जनामाथि दायर भएको मुद्दालगायतका दर्जनौं अन्य मुद्दाले समेत यो तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । तर पछिल्लो समय उनी स्वेच्छाचारी बन्दै गए । अदालतलाई समेत टेर्न छाडे त्यसले भने उनको केही समयअघि बढेको कद घटाउने काम गर्यो । अख्तियारको सुरुका दिनहरुमा केही हदसम्म भने भ्रष्टाचारीहरुलाई तह लगाउन भने सफल भएकै हुन् लोकमान ।
लोकमान गलत थिए भने दलहरुले किन अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरे ? पक्कै पनि यहाँनेर दलहरुको स्वार्थ लुकेको हुनुपर्छ । प्रश्न यहाँनेर पनि तेर्सिएको छ । सबै दल मिलेर लोकमानको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिए पनि उनले अनुसन्धान अगाडि त बढाउनै पर्छ । किनकि आफू बचियो भनेर देश डुबाउने कुरो त आउँदैन । यदि पारित भयो भने पनि सबै भ्रष्टाचारीहरुको प्रकरण बारे पत्रकार सम्मेलन मार्फत जनतालाई जानकारी गराउनु पर्छ । मैले फलानो फलानोको यो फाइल अनुसन्धानका लागि अघि बढाउँदै थिएँ । त्यसमा फलानो पार्टीका नेताहरुमाथि छानविन हुन्थ्यो त्यसकारण मलाई महाअभियोग लगाइयो भनेर जनतामाझ प्रष्ट पारिदिनु पर्छ । कार्कीले त्यति गरे पनि भ्रष्टाचार छानविनमा उनको कदम कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । आगामी दिनमा त्यस कदमले भ्रष्टाचार कम गराउन सक्छ । लोकमानले त्यति गर्न भ्याए भने आगामी दिनमा अख्तियार बलियो हुन्छ नत्र अख्तियारलाई कमजोर बनाएर सत्ता र पदको आडमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुको रणनीति सफल हुनेछ ।